high-Powered ဖလက်ရှမီး LED | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » high-Power LED ဖလက်ရှမီး
high-Power LED ဖလက်ရှမီး APK ကို
တောက်ပဖလက်ရှမီး - နေရာလေးကိုမီးရှူးတိုင် & ခေါ်ဆိုခမျက်နှာပြင်အလင်းအိမ်နှင့်အတူအခမဲ့ဖလက်ရှမီး app ကို! တောက်ပလက်နှိပ်ဓာတ်မီးချက်ချင်းသင့်ကင်မရာသည်အလင်းကိုဦးဆောင်ရယူသုံးခြင်းဖြင့်တောက်ပသောမီးရှူးသို့သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျမှောင်မိုက်၌အပိုပါဝါအလင်းလိုအပ်ချိန်တွင် LED ဓာတ်မီးကအရမ်းအဆင်ပြေပါ! ဒါဟာလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ် Now! ဒါဟာအကောင်းဆုံး 2017 Android ကိုလက်နှိပ်ဓာတ်မီးနှင့်အာဏာအရှိဆုံးလက်နှိပ်ဓာတ်မီးပါ! Android နှင့် strobing လက်နှိပ်ဓာတ်မီးများအတွက်တောက်ပလက်နှိပ်ဓာတ်မီး, LED ဓာတ်မီး, flash ကိုအလင်း, အစွမ်းထက်ဓာတ်မီးအခမဲ့ဖလက်ရှမီးပျော်ရွှင်ခံစားပါ! အဆိုပါတောက်ပ LED မီးအလင်း, အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကို!
+ တောက်ပဖလက်ရှမီး - ပိုကောင်းသာမန်လက်နှိပ်ဓာတ်မီး & မီးရှူးတိုင်ထက်စျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံးဖလက်ရှမီး။
+ LED ဖလက်ရှမီး - သင်လိုအပ်တဲ့အခါမှာရရှိနိုင်အမြဲဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောတောက်ပလက်နှိပ်ဓာတ်မီး app ကိုအလင်းဦးဆောင်ခဲ့သည်။
+ အခမဲ့ဖလက်ရှမီး - လူကြိုက်များသောနှင့် 500m အသုံးပြုသူများကိုကျော်အားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ Android အတွက်တောက်ပလက်နှိပ်ဓာတ်မီး app ကို။
+ Power ကအလင်း - အအင်အားအကောင်းဆုံးနှင့်သြဇာအရှိဆုံးလက်နှိပ်ဓာတ်မီးလာသောအခါပါဝါပြတ်တောက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
+ အရေးပေါ်ဖလက်ရှမီး - သည့်အခါအရေးပေါ်အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ signal ကိုပေးပို့ပါ။ အလွန်အသုံးဝင်သောလက်နှိပ်ဓာတ်မီး။
+ Flash ကိုအလင်း - သင့် phoen များအတွက် Amazing strobing နဲ့ LED အလင်း!9ကွဲပြားခြားနားသော strobing လက်နှိပ်ဓာတ်မီးသည် Modes ထောက်ခံပါတယ်။
အစဉ်အဆက်တောက်ပနဲ့ LED ဖလက်ရှမီး + ။
အရေးပေါ်အဘို့ + Easy-To-အသုံးပြုမှု Flash ကိုအလင်း app ကို။
+9အမျိုးမျိုး strobing light / Blink Mode ကို။
+5စတိုင်မျက်နှာပြင်ခေါ်ဆိုမှုများအတွက် flash LED ။
+ Multi နဲ့ LED ဖလက်ရှမီးမှိတ်သည့်အခါခေါ်ဆိုခဝင်လာသော။
အမှောင်အတွက် Torch လက်နှိပ်ဓာတ်မီး app ကိုဝစ်ဂျက် + ။
ချောမွေ့ညှိနှိုင်းမှုနှင့်အတူအခမဲ့ဖလက်ရှမီး Widget လေး + ။
Highly Sensitive ပြောင်းလဲမည်ခလုတ်ကိုနှင့်အတူပါဝါအလင်း + ။
တောက်ပနဲ့ LED ဖလက်ရှမီး
အခမဲ့တောက်ပလက်နှိပ်ဓာတ်မီး app ကိုချက်ချင်းသင့်ကင်မရာ flash ကိုရယူသုံးခြင်းဖြင့်အခမဲ့တောက်ပလက်နှိပ်ဓာတ်မီးသို့သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပြန်သွားလေ၏။ အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဖလက်ရှမီးကို Android အင်အားအကောင်းဆုံးလက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုဦးဆောင်နှင့်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုအတူသင်တို့သည် 500m အသုံးပြုသူများကိုကျော်အားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရညျ!
ဖလက်ရှမီးကို download နှင့်အတူ, သငျသညျဖုန်းကိုများစွာသောမော်ဒယ်များဘို့ပါဝါအလင်းသုံးစွဲဖို့ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူပါတယ်ရနိုင်သည်။ ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံအတွက်ချက်ချင်းဦးဆောင်သည့်အင်အားအရှိဆုံးလက်နှိပ်ဓာတ်မီးသို့သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်ပါ!
ဒီတောက်ပ flash ကိုအလင်း app ကိုခံစားကြည့်ပါ! သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုရိုးရှင်းစွာသင့်ကင်မရာကို LED အလင်းကိုရယူသုံးခြင်းဖြင့်အမှန်တကယ်တောက်ပ torchlight အဖြစ်ထွန်းလင်းပါလိမ့်မယ်။ မှောင်မိုက်၌သင်တို့အပိုအလင်းလိုအပ်ချိန်တွင်အခမဲ့တောက်ပပါဝါအလင်းစူပါအဆင်ပြေစေရန်အားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့!
strobing light & blinking MODE
သင့်ရဲ့ Android အတွက်အံ့သြဖွယ် strobing light!9ကွဲပြားခြားနားသောတောက်ပ strobing light တူအောင်ဖန်တီးရန်သင့်ဖုန်းရဲ့ LED ကိုကင်မရာကလက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုအသုံးပြုသည်သို့မဟုတ်အလင်းသည် Modes blinking ။ အခမဲ့ strobing အလင်းနှင့်အတူ, သငျသညျတောက်ပသုံးနိုငျ
အိမ်မှာ, ကျောင်းမှာအရေးပေါ်အခြေအနေများသို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအောက်တွင်ပါတီများအတွက် LED အကောင်းဆုံးဖလက်ရှမီး။
ခေါ်ဆိုမှုများအတွက် SCREEN ကိုလျှပ်တစ်ပြက်မီး
တောက်ပပါဝါဖလက်ရှမီးဦးဆောင်နှင့်တကွသင်ခေါ်ဆိုသူ ID နောက်ခံအဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့အဘို့, အမျိုးမျိုးသောစတိုင် themes များကဒီမှာရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစိတ်ကြိုက်ကထူးခြားတဲ့ပါစေ။
ရိုးရှင်းသောဖလက်ရှမီးကို Android နှင့်အတူသင် app ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းသို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်သော့ဖွင့်စရာမလိုဘဲဦးဆောင်သည့်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုဖွင့်နိုင်သည်!
တောက်ပ Tiny ဖလက်ရှမီးကိုအလိုအလျောက်သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့အားသွင်း status ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် Over-အားသွင်းဘက်ထရီထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန်ရပ်တန့်နိုင်ပါ။
LED flash ခေါ်ဆို REMINDER
LED Flash ကိုရသောအခါခေါ်ဆိုခဝင်လာသောမျက်တောင်ခတ်သည်နှင့်အဝင်ခေါ်ဆိုမှုရှိပါတယ်သည့်အခါသတိပေးချက်အဘို့အတောက် LED! သင်သည်မည်သည့်အရေးကြီးသောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလက်လွတ်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
+ အလင်းဖွင့်သင့်ရဲ့ညဥ့်အခါ, ပါဝါပြတ်တောက်။
+ တောက်ပ mini ကိုလက်နှိပ်ဓာတ်မီးနှင့်အတူနေဝင်ချိန်ပြီးနောက်ခွေး Walk ။
+ Multi နဲ့ LED & တောက်ပအလင်းတပ် ချ. နှင့်တောင်တက်အခါလမ်းထွန်း။
+ ဒုက္ခဆင်းရဲ Morse က Code ကို & strobing ဖလက်ရှမီးနှင့်အတူခေါ်ဆိုထားပါ။
+ အလွန်သေးငယ်သောလက်နှိပ်ဓာတ်မီးကို အသုံးပြု. မှောင်မိုက်၌သင်တို့၏သော့များကိုရှာပါ။
+ Torchlight လက်နှိပ်ဓာတ်မီးညအချိန်တွင်လမ်းဘေးအပေါ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မြင်နိုင်စေသည်။
+ အစာရှောင်ခြင်းလက်နှိပ်ဓာတ်မီးကို အသုံးပြု. သူငယ်အပေါ်ကိုစစ်ဆေးပါ။
ဒါဟာယနေ့ညများအတွက်အကောင်းဆုံး option ကိုပါ! Let`s ဤလှပသော, လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုခြင်းနှင့် LED တောက်ပ torchlight လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုခံစား! NOW က Download!
- Optimized အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို
high-Power LED ဖလက်ရှမီး
10.77 ကို MB
စူပါတောက်ပ LED ကို ...
ဖလက်ရှမီး - ...
အခန်းစီမံကိန်း - အိမ်တွင်းနှင့်ကြမ်းပြင်ဒီဇိုင်း ...